စျေးပေါသောဥရောပခရီးစဉ်များမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဥရောပမှာခရီးသွားဧည့်ကြီးအထဲကနေအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် ကော်ဖီဆိုင်များ သို့ လှပသောကမ်းခြေ. တူသောမြို့ကြီးများ၏ရလဒ်အဖြစ် ဗင်းနစ်, ရောမမြို့, နှင့် ခရီးသွားဧည့်ခရီးသွားများ၏ပဲရစ်သန်းပေါင်းများစွာသော နှစ်စဉ်ဥရောပသို့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးဥရောပခရီးစဉ်များစာရင်းကိုဖန်တီး. ဒီစာရင်းထဲမှာရထားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာပါပါတယ်.
ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတစ်ဦးကို တင်. ပြန်လည်မြို့ဖြစ်၏. တစ်နေ့လည်ခင်း siesta ခံစားကြည့်ပါ. ဂျူး, ခရစ်ယာန်, နှင့်အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှု. ခရီးရှေးဟောင်းဘုရား နှင့် ghettos တစ်နေ့တာအတွင်း. အစားအစာအရသာဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့် Tapas. ယင်းအပေါ်လက်တန်းဂစ်တာဂီတ လမ်းများဖမ်းယူနိုင်ခြင်း ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံများလျှော့ပေါ့လေထု. ဤသည်မှာစျေးပေါတဲ့ဥရောပခရီးစဉ်မြို့ဖြစ်ကောင်းကိုအကောင်းဆုံးရှိပါတယ် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း ဥရောပနှင့်ကြွယ်ဝသမိုင်းအတွက်.
ဗလင်စီယာရှိပါတယ်3အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းခြေ. ရလဒ်အနေဖြင့်, ကကြီးစွာသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်. စျေးပေါ ဥရောပအမျိုးသားရေးပန်းခြံ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တောင်တက်အဘို့ကြီးသောရာအရပျ. အနီးကပ် La Albufera အမျိုးသားဥယျာဉ် တောင်တက်အဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အစားကောင်းကြိုက်သူများလည်းယင်း၏အဘို့အဗလင်စီယာကိုချစ် လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ.
ဗလင်စီယာရဲ့ရရန်မည်သို့အပေါ်လမ်းညွန်များအတွက် ဘူတာရုံ မွောကျ ရထားဘူတာသည် Save A ရထားဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါ.
နောက်ထပ်အံ့သြစရာများနှင့်စျေးပေါမြို့အစ္စတန်ဘူလ်ဖြစ်ပါသည်. တူရကီမြို့တော်ဥရောပနှင့်အာရှအတူတကွဆောင်တတ်၏ကြောင့်,. ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကြွယ်ဝ, လှပသောဗိသုကာ, နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားရှုခင်းများ. အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူမိုးခုံးမိုးမျှော်များနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောအပြာပင်လယ်ရေကြောင်း. ဤမြို့သည်အံ့သြဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူအာရုံအဘို့သည်ကြီး, အနံ့, နှင့်မြို့တော်တစ်လျှောက်လုံးအသံ. ဒီမှာလူကြိုက်များအစားအစာဖြစ်နိုငျသော doner kebab နှင့်တူရကီချိုမြိန်ရယူထားသောဖြစ်ပါသည် လမ်းမများပေါ်တွင်ဝယ်ယူ. အထက်ပါအားလုံးသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာတွေ့ကြုံရနိုင်
Istanbul ရဲ့ Sirkeci ဘူတာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်အတွက် Save A Train ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပါ.
သင်သည်စျေးပေါသောဥရောပခရီးစဉ်များသို့သွားရန်စီစဉ်ထားသည်? အဘယ်ကြောင့်မယူ3ယင်းကိုရှာဖွေမိနစ် စျေးအသက်သာဆုံးမီးရထားခရီး. ယခုကြှနျုပျတို့၏ website မှ Login နှင့်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုရ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော. ကျနော်တို့ငွေပေးချေမှု၌ရှိသမျှသောအဓိကပုံစံများကိုလက်ခံ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcheap-european-destinations%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)